Ku hel Peter Servold Paleo Cunnada Buugga LACAG LA'AAN - Dib-u-Celinta Jimicsiga
Bogga ugu weyn » Book » Ku hel buugga 'Paleo' Peter Servold buugiisa cunto bilaash ah
Waqtiga xaddidan oo keliya, Peter Servold wuxuu bixinayaa buuggiisa cusub ee 'Paleo recipe' oo la yiraahdo Paleo Cun BILAASH!
Haddii aad raadineysid sidoo kale cuntooyinka macmacaanka Paleo, hubi inaad soo qaadato nuqul ka mid ah buugga cuntada ee macmacaanka Bilaashka ah ee Kelsey Ale ee bilaashka ah http://www.paleosweetsbook.com
Waxba laguma soo celin doono dalabkan Paleo ee Bilaashka ah Paleo Cookbook. Waxa ugu dambeeya ee aad bixineyso markaad hesho buuggu waa hal mar oo maraakiib ah. Buuggan karinta Paleo runti waa 100% bilaash, waana habka Pete uu ugu soo bandhigo buugiisa karinta Paleo. Fadlan ogow in degelkani uu heli karo magdhowga iibsiyada laga sameeyay tixraacyada xiriirka fadlan fiiri boggayaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wixii macluumaad dheeraad ah ..